​Qof naafo ah waa qof qabo cudur ama dhaawac keenaayo in uu baahan yahay taageero dheeraad ah.
Qofka sidaas ah waa in isku fursada uu ulhaadaa nolosha-bulshada ee dadka kale. Tusaale ahaan caruurta naafa ah waa in ee sida caruurta kale uu helaan xanaanada-caruurta iyo dugsi dhigashada.
Waxaa jiro sharciga LSS oo ah sharci taageera iyo caawinaad xaq uu siinaayo qofka naafaha ah. Taageerada waxeey tusaale ahaan kartaa qof kuugu caawiyo si aad uu fulin laheeyd hawlqabadkaada maalmeed. Waxaad sido kale heli kartaa lacag (lacagta naafada) haddii naafanimada ee tahay mid keeneeyso kharashyo dheeraad ah ama haddii aad tusaale ahaan uu baahan tahay taageero si aad wax uu shaqeeyo ama dugsi waxbarasho dhigato. Waxaad lacagta naafada (handikappersättning) laga codsadaa Hey'adda qasnada ceeymiska (försäkringskassan).
Waxuu LSS taageero ku heli kartaa haddii aad qabto garad dhimasho, xanuunka autism ama dhaawacyo jireed ama maskaxeed. Qofka qabo canug naafao ah, waxuu heli karaa lacagta kaalmada daryeelka (vårdbidrag). Haddii aad qabto su'alooyin ku saabsan naafanimo, waxaad la hadleeysa xafiiska degmada bulshada ee degmadaada.
Warbixin dheeri ah waxaad ka heleysaa bogga Sanduuqa ceymiska
Haddi ee dhibaato kuugu tahay in aad kaligaa safarto ama raacida gaadiidka-dadweeynaha (basaka iyo tareemada) waxaad heli kartaa adeega raacida (färdtjänst). Waxaa markaas raaceeysaa taksi ama bas yar. Degmada ayaa go'aan ka gaareeyso haddii aad heli karto adeega-raacida.
Adiga heysta xanuun joogto ah ama cuuryaanimo waxaad ka heli kartaa lacag iyo kaalmo sanduuqa ceymiska. Waxaad tusaale ahaan codsan kartaa qalab shaqo,kharash jirro, kaalmo baabuur, iyo inaad hesho caawinaad ku saabsan kharashkaada degaanka.
Adiga raadinaya shaqo iskana diiwaan geliyey xafiiska shaqada waxaad heli kartaa kaalmo gaar ah. Wax dheeraad ah ka sii akhri:
DHR - Ururka bulsho aan laheyn cuuryaanimo
HSO - ururka cuuryaamiinta
SRF - Urur weynaha dadka heysta dhaawaca indhaha
HRF - ururweynaha kuwa heysta dhaawaca maqalka
RSMH - Urur weynaha ee bulshada iyo caafimaad darada maskaxda
NSPH - Wada shaqeynta qaran ee caafimaadka nafsiga
FUB - ee carruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee heysta dhibaato xagga horumarka maskaxda ah
Ururka dhalinta ee cuuryaamiinta
RBU - Ururuka dhallinta iyo dhalinyarada ee cuuryaamiinta